Impahla Yokuqasha Esigabeni 74, Noida
Real Estate Listings: » Residential homes » IN » Uttar Pradesh » Noida » Sector 74 » Impahla Yokuqasha Esigabeni 74, Noida1
Usayizi waphansi: 1625 Sq feet
Yindlu ezimele eyi-3 bhk etholakala eSupertech Cape Town, eMkhakheni wama-74. Umnyango wayo omkhulu ubheke ohlangothini olusenyakatho. Kuyisakhiwo esilungele ukuhamba. Umphakathi uxhunywe kahle izindlela ezahlukahlukene zokuhamba. Sicela usishayele ngemininingwane.
Xhumana nomkhangisi 170034xxxx
Umkhakha u-74 utholakala eNoida. Amadolobha aseduze afana neGhaziabad, Meerut, Moradabad, Bulandshahr, Greater Noida, Sikandrabad, Muzaffarnagar nase Sambhal. UkuxhumanaInethiwekhi kamasipala we-Delhi ixhumanisa le ndawo ezindaweni eziningi eDelhi nangale. UNoida unezindlela ezi-3 eziphambili, iDND Flyway, iNoida-Greater Noida Expressway ne-Yamuna Expressway, ezihlinzeka ngokuxhumana okuhle komgwaqo. IGhaziabad ne-Anand Vihar yisiteshi sesitimela esiseduze kakhulu ukusuka endaweni.Izindawo zokuhlala ezakhiwayo izindlu kule ndawo zakhiwa futhi zithuthukiswa ngesivinini esikhulu futhi sekuqhamuke izakhiwo nezindlu eziningi futhi kunamaphrojekthi amaningi aqhubekayo kule ndawo. ezakhiwa ngendlela esetshenziswa kakhulu emadolobheni ukuze ihambisane nezidingo zabahlali basemadolobheni.Ingqalasizinda yeNocialNoida Sector 74 inezibhedlela ezifana ne-Ashwini Hospital, iSyjan Clinic, i-Eye Health Clinic, iSamvedana Multispecialty Hospital, iCardiaGreen Advanced Heart Care Center, nezinye. Amabhange Amakhulu lapha afaka iBhange Lombuso LaseNdiya, Ibhange Lenkampani, I-HDFC Bank, I-Allahabad Bank neBhange likaKotak Mahindra.